Xaashi oo cadeeyay in Sabtida wax kulan ah la lahayn Madaxweynaha | Dhacdo
Home Wararka Maanta Xaashi oo cadeeyay in Sabtida wax kulan ah la lahayn Madaxweynaha
Xaashi oo cadeeyay in Sabtida wax kulan ah la lahayn Madaxweynaha
Cabdi Xaashi Cabdullaahi, Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somaliya ayaa cadeeyay inaanu Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo weydiisan Labada Aqal kulan wadajir ah.
Qoraal ka soo baxay Xafiiska Gudoomiyaha Aqalka Sare ayaa lagu yiri “Dhammaan Senatorada Golaha Aqalka Sare ee BFS waxaa lagu wargelinayaa in uusan jirin kulan wadajir ah oo Madaxweynuhu ka soo codsadey Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare, si waafaqsan Qod.57aad (c) ee Dastuurka KMG ah iyo Qod.59 aad (4) ee Xeerhoosaadka Golaha.”
Senatorada Aqalka Sare ayaa lagu wargeliyay inaysan Labada Aqal berrito u ballansanayn wax kulan ah, oo ay la yeelanayaan Madaxweynaha.
“Sidaas darteed, ma jiro kulan wadajir ah oo ay xubnaha Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya u ballansan yihiin birito oo taariikhdu tahay 06 Febraayo 2021.” Ayaa lagu yiri qoraalka.
Villa Somalia ayaa daba-yaaqadii bishii hore ee January soo saartay jadwal ku xusnaa in Madaxweynuhu uu 5-ta bisha oo maanta ku beegneyd hortaggi doono Labada Aqal, inkastoo Xafiiska Madaxweynaha uu markii dambe u bedelay 6-da bisha oo Sabtida berrito ah.
Tani ayaa ku soo aadaysa, xilli aan wax heshiis ah laga gaarin shirka maalintii 3aad Madaxda Dowlad Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir uga soconaya Magaalada Dhuusamareeb.
Previous articleBurcad sameysay basaboor ay u ekeysiiyeen inuu Rambo leeyahay
Next articleWasiir Falagle “Shirkan haddii uu natiijo keeni waayo, inay arrinta Somaliya halis u muuqaneyso”